Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Tong Na Enterprise Co., Ltd. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ, သတ္တုနွေဦးအပိုင်းများ, သတ္တုဒုန်း အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ
Metal stamping သည် သတ္တုပြားများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဗြောင်ချခြင်း၊ ဖောက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်းနှင့် အပေါက်ဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သော သတ္တုဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များစွာ ပါဝင်နိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် သတ္တုနွေဦးအပိုင်းများ ၊ သတ္တုဒုန်း ၊ သတ္တုတံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ၊နွေဦးအစိတ်အပိုင်းများ ၊ သရက်ကင်း နွေဦး ၊ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ နှင့် CNC အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ သတ္တုတံဆိပ်ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် နည်းပညာအသစ်များဖြင့် ဆက်လက်တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆုံးမှ အဆုံး အလိုအလျောက် တိုးမြှင့်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေရုံသာမက တံဆိပ်တုံးထုသည့် စက်များမှာလည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မော်တော်ကားတွေ အများကြီးရှိတယ်။တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ နှင့်စမ်းများ။ သတ္တုတံဆိပ်တုံးထုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပုံစံများကို လျင်မြန်သန့်ရှင်းစွာ ဖန်တီးနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် သတ္တုစာရွက်များကို မှန်ကန်သောပုံစံသို့ တိကျစွာဖိပေးသည့် အထူးပြုသေများကို အသုံးပြုသည်။ ဤစပရိန်များကို စျေးကွက်ရှိ အဆင့်မြင့်ဆုံးကားသစ်များတွင် အသုံးပြုပြီး ယာဉ်အသုံးပြုသူများကို ယနေ့ရရှိနိုင်သည့် အချောမွေ့ဆုံးခရီးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သက်တမ်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မစ်ရှင်အရေးပါသော အသုံးချပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဥ်စမ်းရေတွင်းများ၊ ဝါယာကြိုးပုံစံများနှင့် တံဆိပ်တုံးများကို လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံ၍ မကြာခဏရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါတယ်။